“स्ववियुमा मात्र होइन, विद्यार्थी सङगठनमा पनि उमेर हद लगाउनुपर्छ” – Contemporary News Portal From Nepal
प्रकाशित मिति: १२ माघ २०७३, बुधबार २१:१४
अनुज न्यौपाने– त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हरेक दुईदुई वर्षमा गर्नुपर्न स्ववियु निर्वाचन ०६५ यता गर्न सकिरहेको छैन । लामो समयपछि यहि फागुन १४ गते स्ववियु निर्वाचन हुने भनेर त्रिभुवन विश्व विद्यालयले मिति तोकिसकेको छ । ठुलाठुला विद्यार्थी सङगठनहरु पनि स्ववियु निर्वाचनका लागी तयार भैसकेका छन, जसले गर्दा यसपटक स्ववियु निर्वाचन हुने पक्का पक्कि जस्तै भैसकेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २८ वर्ष उमेर हदको एउटा सुरुवात गरेको छ, यो सुरुवात आम विद्ययार्थीका लागी स्वागतयोग्य विषय हो । त्रिविले तोकेको उमेर हद लागु भयो भने जोस,जाँगर र विद्यार्थीको समस्या बुझन सक्ने विद्यार्थी नेताहरु नै यसपटक स्ववियुमा जान पाउने छन । स्ववियुमा मात्र होइन, विद्यार्थी सङगठनमा पनि २८ वर्ष उमेर हद लगाउनुपर्छ ।
यदि विद्यार्थी सङगठनमा उमेर हद लागु नहुने र स्ववियुमा उमेर हद लागु गरिने हो भने घरको ढोका बन्द गरेर कोठाको ढोका खोलेझै हुनेछ । हरेक पार्टिका विद्यार्थी सङगठनको नेतृत्व २८ वर्ष भन्दा तल उमेरका विद्यार्थी नेताहरुले गर्नुपर्दछ । आजको विद्यार्थीको राजनितिक अवस्थालाई हेर्न हो भने विद्यार्थी राजनितिमा ४० उमेर पुगेकाहरु समेत बस्ने र स्थान ओगटने गर्छन ।
४० उमेरका नेताले विद्यार्थी नेता हु भनेर परिचय दिदा अलिकति लाज पनि लाग्दैन है ? मान्छे सधै विद्यार्थी हुन सक्छ तर विद्यार्थी नेता हुन सक्दैन । के २८ तलका विद्यार्थी नेताहरुले सङगठनलाइ हाक्न सक्दैनन ? समस्या कहाँ छ , के हो समस्या ? यि कुरामा बहस गरौँ । कुनै विद्यार्थी नेताले उमेरले ३० वर्ष पार गरिसकेको छ, दिनरात नभनि विद्यार्थीको समस्याहरु सामाधान गर्न सङर्घष गरिरहेको छ तर स्ववियु निर्वाचनमा उसले भाग लिन पाएन भने उसले गरेको राजनितिको के अस्तित्व ? के प्रश्नहरु खेल्छन होला उसको मस्तिस्कमा ? आफुलाइ यो पात्र सम्झिएर,केहिबेर सोच्ने होकि ?
अब आउने पुस्तालाइ कहाँ राख्ने,माथिका नेताहरुले ४० वर्षको उमेर सम्म विद्यार्थी राजनितिनै गरिरहे भने ? अहिलेको मुख्य समस्यानै यहि हो । त्यसैले स्ववियु निर्वाचनमा मात्र होइन हरेक विद्यार्थी सङगठनमा पनि उमेर हद लगाउनु जरुरी छ । जसले गर्दा विद्यार्थी राजनितिमा धेरै भन्दा धेरै विद्यार्थीहरु आउने गर्छन र विद्यार्थीका समस्या सँग लडन खोज्छन । यसरिनै जाने हो भने नयाँ पुस्ताको पालो कहिले आउने ? इतिहासलाई परिमार्जन गर्न त सकिदैन तर अब आउने दिनमा यि कुराहरुलाइ ख्याल राख्नु पर्दछ । अब आउने हरेक विद्यार्थी सङगठनको चुनावमा उमेरको हद लगाउनु पर्छ ।
१२ माघ २०७३, बुधबार २१:१४ मा प्रकाशित